Izinhlobo zemisebe yelanga: izici nokusebenza | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Izinhlobo zemisebe yelanga
La imisebe yelanga Kuyinto eguquguqukayo ebaluleke kakhulu esebenza ukwazi inani lokushisa esikuthola kusuka elangeni ebusweni bomhlaba. Ngokuya ngezici ezithile ezifana nomoya, amafu nesikhathi sonyaka, sithola inani elikhulu noma elincane lemisebe yelanga. Inekhono lokushisa ubuso bomhlaba nezinto ngaphandle kokushisa umoya. Kunezinhlobo ezahlukahlukene zemisebe yelanga kuya ngemvelaphi kanye nezici zayo.
Yazi konke okuphathelene nemisebe yelanga, izinhlobo ezikhona nokuthi unamiphi imiphumela kwiplanethi nasempilweni.
1 Yini imisebe yelanga
2 Izinhlobo zemisebe yelanga
2.1 Imisebe yelanga eqondile
2.2 Ukusabalalisa imisebe yelanga
2.3 Imisebe yelanga ebonakalisiwe
2.4 Imisebe yelanga yomhlaba
3 Ukuthinta kanjani impilo nomhlaba
Yini imisebe yelanga
Ukuhamba kwamandla okutholwa yilanga ngendlela yamagagasi kagesi amaza ahlukahlukene. Phakathi kwamafrikhwensi esiwathola emkhakheni we-electromagnetic sinokwaziwa kakhulu njengokukhanya okubonakalayo, kwe-infrared kanye ne-ultraviolet. Siyazi ukuthi cishe isigamu semisebe yelanga etholwa yiplanethi yethu inakho imvamisa efakwe phakathi kwamabanga we-0.4μm no-0.7μm. Lolu hlobo lwemisebe lungatholakala ngeso lomuntu futhi yilokho okwenza umucu esiwaziyo njengokukhanya okubonakalayo.
Enye ingxenye ikakhulu isengxenyeni ye-infrared ye-spectrum nengxenye encane ku-ultraviolet. Ukuze sikwazi ukukala ukuthi singakanani imisebe esiyithola elangeni kusetshenziswa insimbi eyaziwa ngokuthi i-pyranometer.
Ngokuya ngemvelaphi nezici zemisebe yelanga, kunezinhlobo ezahlukahlukene. Sizogxila ekuchazeni ukuthi yiziphi izinhlobo ezahlukahlukene nezimpawu zazo eziyinhloko:
Imisebe yelanga eqondile
Imayelana naleyo eyodwa iphuma ngqo elangeni futhi ayinakuthola ushintsho ezinkomba. Lokhu kungabonakala kuthonywe umoya, kepha hhayi ngezinga elikhulu. Ukunciphisa ukushisa kungazwakala phakathi nezinsuku ezinomoya. Ezingxenyeni, ukushisa akuthinti njengamandla lapho kunombuso womoya onamandla. Lolu hlobo lwemisebe lunobuntu obuyinhloko futhi lokho ukuthi lungabeka isithunzi esichaziwe kusuka kunoma iyiphi into e-opaque eyinqamulelayo.
Ukusabalalisa imisebe yelanga
Kuyingxenye yemisebe efinyelela kithi kusuka elangeni nokuthi kubonakala noma kumuncwa ngamafu. Kuyaziwa ngegama lokusabalalisa ngoba zinweba kuzo zonke izinkomba. Le nqubo yenzeka ngenxa yokubukwa nokufakwa, hhayi kusuka emafwini kuphela, kepha kusuka kwezinye izinhlayiya ezikhona zintanta emkhathini. Lezi zinhlayiya zibizwa ngothuli lomkhathi futhi ziyakwazi ukusabalalisa imisebe yelanga. Kubizwa nangokuthi kusatshalaliswa ngoba kuhlungwe ngezinye izinto njengezintaba, izihlahla, izakhiwo nomhlabathi uqobo, kuya ngomthethosisekelo wawo.
Isici esiyinhloko sale radiation ukuthi ayiphosi isithunzi ezintweni ezingabonakali ezifakiwe. Indawo evundlile yilezo zindawo lapho kunenani elikhulu lemisebe ebhebhethekayo. Ngokuphambene nalokho kwenzeka ngokuvela okuqondile, ngoba akukho ukuxhumana.
Imisebe yelanga ebonakalisiwe
Yileso esibonisa ubuso bomhlaba. Akuyona yonke imisebe efinyelela kithi evela elangeni emuncwa ingaphezulu, kepha eminye yayo isukile kwenye indawo. Leli nani lemisebe elihlanekezelwe ebusweni laziwa njenge-albedo. I-albedo yasemhlabeni iyanda kakhulu ngenxa yomphumela wokushintsha kwesimo sezulu kanye nokuncibilika kwamakhekheba eqhwa asezindaweni ezibandayo.
Izindawo ezingaphezulu zivundlile azitholi noma yiluphi uhlobo lwemisebe ebonakalisiwe njengoba zingaboni ndawo yasemhlabeni. Okuhlukile kunjalo ngemisebe yelanga esakazekayo. Esimweni esinjalo, yizindawo eziqondile ezithola inani elikhulu lemisebe ebonakalisiwe.
Imisebe yelanga yomhlaba
Kungashiwo ukuthi yimisebe ephelele ekhona emhlabeni. Kuyisamba semisebe emi-3 iqanjwe ngenhla. Ake sithathe isibonelo sosuku olubalele ngokuphelele. Lapha sizoba nemisebe eqondile ezobe iphakeme kunemisebe esabalalisayo. Kodwa-ke, ngosuku olunamafu ngeke kube khona imisebe eqondile, kepha yonke imisebe eshayayo futhi esakazekayo.
Ukuthinta kanjani impilo nomhlaba
Uma inani lemisebe yelanga etholwa yiplanethi yethu, impilo ibingenakuphakama njengoba injalo. Ibhalansi yamandla oMhlaba ingu-0. Lokhu kusho ukuthi inani lemisebe yelanga etholwa yiplanethi nokuthi ikhiphela emuva emkhathini iyefana. Noma kunjalo, amanye ama-nuances kufanele engezwe. Ngaleso sizathu izinga lokushisa emhlabeni lizoba -88 degrees. Ngakho-ke udinga into engagcina le radiation futhi yenze amazinga okushisa anethezeke futhi akwazi ukuhlala abantu ukuze ikwazi ukusekela impilo.
Umphumela wokushisa okushisa kakhulu yinjini esiza imisebe yelanga ewela ebusweni bomhlaba ukuthi ihlale kakhulu. Ngenxa yomphumela wokushisa okushisayo singaba nezimo zokuhlala emhlabeni. Lapho imisebe yelanga ihlasela phezulu, ibuyisela cishe isigamu emuva emkhathini ukuyikhiphela ngaphandle. Eminye yale misebe ebuya ebusweni iyangena futhi ibonakaliswe amafu nothuli lomkhathi. Kodwa-ke, leli nani lemisebe emuncu alanele ukuze likwazi ukugcina izinga lokushisa elizinzile.
Yilapho kungena khona amagesi abamba ukushisa. Kuyizinhlobonhlobo zamagesi anekhono lokugcina ingxenye yokushisa okukhishwa ebusweni bomhlaba, abuyisele imisebe yelanga efinyelele kuwo emoyeni. Amagesi abamba ukushisa angokulandelayo: umusi wamanzi, i-carbon dioxide (CO2), i-nitrogen oxides, i-sulfur oxides, i-methane, njll. Ngokwanda kwamagesi abamba ukushisa okubangelwa yimisebenzi yabantu, imisebe yelanga iba yingozi kakhulu njengoba ibanga imithelela emvelweni, ezimileni, ezilwaneni nakubantu.
Isamba sazo zonke izinhlobo zemisebe yelanga yilezo ezivumela impilo emhlabeni. Asethembe ukuthi izinkinga zokwanda kwamagesi abamba ukushisa zingancipha futhi isimo singabi yingozi.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Izinhlobo zemisebe yelanga